पाँ’च सय वर्ष पुरानो गणे,शको मु.र्ति फेला, बेवास्ता न’गर्नुहोला? पढेर ॐ लेखि शे’यर गरौं - Kohalpur Trends
पाँ’च सय वर्ष पुरानो गणे,शको मु.र्ति फेला, बेवास्ता न’गर्नुहोला? पढेर ॐ लेखि शे’यर गरौं
उनीहरुको आयु पनि लामो हुन्छ । यस्ता ब्यक्ति कम बोल्ने र कला र शिक्षामा अगाडी हुन्छन् । यो बार जन्मिने ब्यक्तिमा धार्मिक आस्था पनि हुन्छ र घर परिवारका सदस्यलाई खुसी राख्न अधिक प्रयास गर्छन् । तर यिनीहरुलाई २० देखि २२ वर्ष सम्म दुःख हुन्छ ।स्त्री : आइतबार जन्मिने स्त्री दान-पुण्य गर्ने र बलशाली एवं चतुर हुन्छन् । द्द।सोमबारः पुरुष स् सोमबार जन्मिने ब्यक्तिको बोली मिठो हुन्छ ।
यस्ता ब्यक्तिको जीवनमा सुख दुख बराबर जस्तै हुन्छ किन भने उनीहरुलाई दुःख सुख उस्तै उस्तै लाग्छसोमबार जन्मिने ब्यकेति विद्वान, कला कुशल र बहादुर पनि हुन्छन् । सोमबार जन्मिने ब्यक्तिलाई श्वास प्रश्वासको रोग हुन सक्छ यस्ता ब्यक्तिलाई ९, १२, २७ वर्षमा कष्ट हुन्छ । स्त्री सोमबार जन्म भएका महिला सुन्दर हुन्छन् । यस्ता महिलामा मिठो बोली र शान्ति प्रिय र पुत्रवति हुन्छन् ।
The put up पाँ’च सय वर्ष पुरानो गणे,शको मु.र्ति फेला, बेवास्ता न’गर्नुहोला? पढेर ॐ लेखि शे’यर गरौं appeared first on The Buddha Khabar.
Previous Previous post: दिनदिनै दुध बेच्ने जाने अनाैठाे कुकुर, जो गाउँमा घर–घरमा गएर दुध बाडेर आउछ (भिडियो)
Next Next post: भाग्यमानी मान्छेले मात्रै देख्ने दाहिने शंखफोटोमा छोएर ॐ लेखी दर्शन गर्नुहोस।